Yintoni iFactoring? | Ezezimali
Ngokuqiniseka konke ukuba ngaphezulu kwesihlandlo esinye uvile ngale mveliso yezemali yiyo le ukufaka izinto, kodwa awazi ukuba iqulathe ntoni, kungaphantsi kakhulu koko unokukusebenzisa. Ewe, ndiyazi Imalunga ne- imveliso elungiselelwe nawuphi na usomashishini okanye ingcali kwaye, ngakumbi iinkampani ezincinci neziphakathi ezithi. Ngale mveliso, banokucutha umthwalo kwisebe lolawulo, bakhuphe ubalo-mali olwenziwe kukuthengisa kunye nokuqokelelwa kwabo, kunye nokuhlawulwa kwangaphambili ngomhla wokuhlawulwa kwee-invoyisi.
Iziphumo zalo ziya kuqatshelwa ngokukhawuleza, kuba ziya kuphucula inzuzo, amandla ekhredithi kunye nokusombulula imali kwinkampani yakho. Phakathi kwezinye izibonelelo zokufumana ikhontrakthi kule mveliso kukufumana ulwazi olunamaxesha ngamaxesha, oluhlaziyiweyo lwabantu abanamatyala, ukunciphisa uxanduva lolawulo okanye yenza lula i-akhawunti yomthengi. Akukho profayile ichaziweyo yeenkampani ezingabasebenzisi bale mveliso yemali, endaweni yoko ukucanda kunikezelwa yimveliso ethengisiweyo kunye neemeko zokuhlawula.
Le mveliso, engaziwa kakuhle kwelinye icala, ilungele ezo nkampani zinqwenela ukugubungela umngcipheko wokungakwazi ukuhlawula amatyala abathengi bazo, kunye nokukwazi ukulindela, nangaliphi na ixesha, ukuthengisa kwabo phambili ngamashishini athengisa le mveliso . Kwangokunjalo, ulawulo lwayo lwe-elektroniki lutofotofo kwaye lulula, kuba umniki walo uthumela atyobele i-invoyisi kunye namanye amaxwebhu kwiziko lezemali. Kwaye xa umntu onetyala eyamkele i-invoyisi, ilungele ukuba isixa-mali siqhubele phambili.
2 Iinkonzo zokuQinisa izinto
3 Izinto eziluncedo zeemveliso
4 Iimodyuli zale mveliso
5 Isivumelwano sale misebenzi
6 Iindleko zokwenza izinto
7 Izibonelelo zeshishini
Yiyo imali kunye nefomula yolawulo, isekwe kunikezelo lwee-invoyisi: inkampani inikezela ngetyala lokuthengisa labathengi bayo kwinkampani, ejongene nokulawula ingqokelela yayo ngokutshintshiselana nokuqwalaselwa okubandakanya ikhomishini yeenkonzo zolawulo kunye nenzala yezemali (kwangaphambili Umhla wokuhlawulwa kwee-invoyisi zabathengi bakho).
Kufuneka kukhunjulwe ukuba amaziko amathathu ahlukaniswe ngokufanelekileyo athatha inxaxheba kule mveliso yemali, ilandelayo:
IngxakiInkampani yenkampani okanye yezemali ebonelela ngeenkonzo zale mveliso.
Umthengi: Ungumnini weekhredithi zorhwebo (ii-invoyisi) kwaye onesivumelwano se-Factoring.
AbanamatyalaAbathengi bempahla yomthengi okanye iinkonzo, ekugqibeleni umthengisi.
Umbutho weSpanish Factoring Association ugxininisa ukuba “akukho nkangeleko ichaziweyo yeenkampani ezisebenzisa le mveliso, kunoko umda unikezelwa yimveliso ethengisiweyo kunye neemeko zentlawulo. Ngamanye amagama, zonke iinkampani zinokuba ngabasebenzisi bencwadi, bathengise kwimarike yasekhaya okanye bathumele ngaphandle ”. Ukufikelela kwinqanaba lokuba zonke ezi nkonzo, egameni lenkampani yeFactoring, ukuvelisa ukonga ngaphakathi kubathengi babo ngokubakhulula kwimisebenzi ebiza kakhulu, entsonkothileyo novelisa uxinzelelo kuzo zonke iintlobo ”.
Iinkonzo zokuQinisa izinto
Ezona zinto zinomtsalane kule nkqubo ziinkonzo ezinxulumene noko, zombini ezolawulo nezemali, ezinxulumene nenkqubo yokuqokelela kwenkampani yakho, kwaye ezi zinto zilandelayo:
Ukuhlelwa kwabathengi: Inkonzo ibandakanya zombini ukufundisisa kunye nohlalutyo lwabathengi, kunye nesigqibo semida yokuthenga ngetyala ekufuneka yabelwe ngamnye kubo.
Lawula ii-akhawunti ezifumanekayo: Ulawulo olubanzi kunye nokubeka iliso kwii-invoyisi ezinikezelwe kwinkampani ye-Factoring, ngamaxesha athile zibazisa ngeziganeko zokuqokelelwa kwe-invoyisi nganye kunye nenqanaba leakhawunti ezifunyanwa kubo bonke abanamatyala.
Ulawulo lokuqokelela nokungahlawulwa: Imalunga nolawulo lokuqala oluyimfuneko ukuze bazi oonobangela bokungathobeli intlawulo yesisombululo esinokubakho.
Imali: inkonzo eyongezelelweyo, kuphela kwimeko apho umnini eyicelile, kwaye ngenxa yokuguquguquka kwayo, ivumela umsebenzisi ukuba alahle izixa zee-invoyisi ezabelwe kwangaphambili, ngexesha kunye nemali efunwa ngunondyebo wabo.
Ukuhlawulwa komngcipheko wokungakwazi ukuhlawula amatyala: ukugubungela ukuya kuthi ga kwi-100% yemali yee-invoyisi ezinikezelwe kwinkampani yeFoodoring elinde ukuqokelelwa, ukuya kuthi ga kumda obelwe umntu ngamnye onetyala. Ikwayinkonzo eyongezelelweyo, ngokwesicelo somthengi.
Izinto eziluncedo zeemveliso
Olu nyango lolawulo lwezemali lubonelela ngothotho lwezibonelelo kwabo bayiqeshayo, ezinje ngale zichazwe ngezantsi. Ayisiyiyo kuphela imbono yobalo, kodwa nolawulo, kwaye kwiimeko ezininzi kulawulo lwenkampani. Kwaye kuyakubanomdla kakhulu kuwe ukudibana nabo kwimeko apho kuya kufuneka unyanzeleke ukuba ubaqeshe.
Ukunciphisa umthwalo wezolawulo kunye nokulungelelanisa iinkqubo zokusebenza.
Ukunciphisa umsebenzi ojongene nolawulo, enegalelo elibonakalayo ekunciphiseni iindleko zolawulo, ezabasebenzi nezonxibelelwano.
Yenza lula iakhawunti yomthengi, Ukwandisa ukusebenza kolawulo lokuqokelela.
Ukubonelela ngolwazi ngamaxesha, rhoqo kunye nokuhlaziywa kwabatyalayo.
Iguqula imisebenzi yokuthengisa ngetyala ibe ukuthengiswa kwemali.
Gwema umngcipheko wokungaphumeleli ngenxa yamatyala amabi.
Ukubonelela ngobume bezemali benkampani nge ukomelela okukhulu.
Ivumela ukucwangciswa kwendyebo ukuba Lungiselela ukuhamba kwemali.
Yandisa amandla ezemali kwaye ikwaphucula umlinganiso wamatyala.
Ukusuka kwindawo yokujonga, kuphucula indawo yenkampani ngokuchasene nokhuphiswano kunye nabathengi, Ukuvumela ukuba wandise intengiso yakho.
Iimodyuli zale mveliso
Kukho iindidi ngeendidi zeFactoring, kuxhomekeke kwiinkonzo ozifunayo, okanye umntu onetyala ekubhekiswa kuye. Phakathi kwazo kukho oku kulandelayo:
Ukungafumani mbuyekezo, le modali ibonelela ngezemali, ithatha inkampani ebeka umngcipheko wokungakwazi ukuhlawula amatyala abo. Ngokucacileyo, amaxabiso kule ndlela aphezulu kakhulu.
Indawo yokubuyisela kwakhona, apho umthengisi ethwala umngcipheko wokungakwazi ukuhlawula amatyala, kuba inkampani yeFactoring ayinaxanduva lokungahlawuli ngumntu onetyala. Le ndlela yokuziphatha yahlukile kuba oko akuthethi ukuba yimali.
Ukuthumela ngaphandle, xa kuziwa kwimisebenzi eyenziweyo kunye nabanamatyala abahlala phesheya. Iluncedo ngokukodwa ekuthumeleni iinkampani kunye neeSMEs ezingenaso isibonelelo esikhulu, kuba kubandakanya iinkonzo zokukhuphela ngaphandle. Ngobungqina, Ukuthumela kwelinye ilizwe phantse kube yintengiso yelizwe, kuba ekuphela kwento ekufuneka yenziwe kukuthumela iimpahla, kwaye enye into ilawulwa yinkampani yeFactoring.
Kule ndlela yokusebenza koqoqosho, inkqubela phambili ayenziwanga ngesiqhelo xa iimpahla ziziimveliso ezinokonakala.
Isivumelwano sale misebenzi
Inkqubo yolwabiwo kunye nekhontrakthi ilula kakhulu kwaye ayinabunzima, kulandela inkqubo efanelekileyo ngabantu okanye ii-SME ezigqiba ukwenza ikhontrakthi kule mveliso yemali. Inyathelo lokuqala ngu Nxibelelana neziko lemali eliyithengisayo okanye inkampani ye-Factoring, ichaze eyona migaqo isebenzayo kwiimfuno zomthengi ngamnye kunye neendleko ezifanayo.
Ngale nto, ukongeza kwidatha yokuchongwa kwenkampani, iqela elinomdla kufuneka linikeze abo bahambelana nomsebenzi wabo kwaye ezo zihambelana nabaxhasi onqwenela ukuzibandakanya kwisivumelwano. Ke ngoko, kufuneka ibonakalise le datha ilandelayo: isixa sentengiso esilindelweyo, inani lee-invoyisi ngenyanga, indlela yentlawulo (i-bill, inqaku lesithembiso, ugqithiselo, njl. Ziya kusebenza njengesiseko sokuvavanya iindleko zomsebenzi yinkampani, kwaye ngale ndlela, ukubanakho ukwenza isithembiso seemeko kumthengi.
Kwangelo xesha, ezi ntlobo zeenkampani ezizodwa Ufunda ngesisombululo soluntu olunamatyala kuvavanya iphothifoliyo yamaxwebhu ekuza kuthethathethwana ngawo. Kwikhontrakthi kukho utshintsho kubunini beekhredithi, ekuthi kusekwe iimfuno ezithile eziyimfuneko ngaphambi kokumisela olu hlobo lwesivumelwano:
Ukuba kukho i-invoyisi okanye uxwebhu oluza kuqokelela intengiso.
Ukuba ii-invoyisi zivela kwintengiso esemthethweni.
Oko kuthengisiwe kwenziwe ngekhredithi.
Emva kokusayina ikhontrakthi efanelekileyo, ileta kufuneka ithunyelwe kwabo banamatyala, ebazisa ukuba usayine ikhontrakthi kolu hlobo lwemveliso. Ke ngoko, ukusukela ngaloo mhla, ukuhlawulwa kwee-invoyisi kufuneka kwenziwe ngokuthe ngqo kule nkampani ichaziweyo.
Iindleko zokwenza izinto
Iinkonzo ezinikezelwa yile mveliso yemali zimele indleko okanye ixabiso ekufuneka laneliswe ngabasebenzisi beenkonzo ezichaziweyo. Iindleko zenziwe ngokusisiseko zizinto ezimbini ezimiselweyo. Kwelinye icala, i umrhumo wokubhalisa, yeenkonzo zolawulo ezenziwa yinkampani ye-Factoring, eyahluka ngokuxhomekeke kwixesha lokuqokelela i-invoyisi.
Kwaye kwelinye, inzala, eya kusetyenziswa xa uthatha ithuba lokuziphatha okubandakanya ukuqhubela phambili kwemali. Nangona kunjalo, iindleko ziyahluka ngokuxhomekeka kwimeko yentengiso (ngokusekwe kwi-3-inyanga ye-Euribor kunye nokusasazeka; inqanaba lokugqibela lenzala liyahlaziywa ngenyanga) kunye nomngcipheko ocingelwa yinkampani ethengisa le mveliso yemali.
Phakathi kwezibonelelo zorhwebo ezenziwa kukusebenza kwemali, ngokwembono ye-Spain Factoring Association, kukho le miba ilandelayo enokunceda oosomashishini abaqeqeshiweyo okanye abancinci nabaphakathi:
Iphucula ngokubonakalayo Ulawulo lokuthengisa kwaye iququzelele amanyathelo afanelekileyo okurhweba.
Ivumela uthungelwano lwentengiso jolisa emsebenzini wakho ngaphandle kokwenza iinkqubo zokuqokelela.
Ivumela okungcono uvavanyo lwabathengi kunye nokulandelelwa kwazo.
Nciphisa iindleko nexesha lokulungiselela iingxelo zorhwebo.
Igalelo elichanekileyo nelisebenzayo ukwenza izigqibo.
Ukuphucula isikhundla senkampani phambi kokhuphiswano kunye nabathengi.
Inegalelo elibonakalayo kwintshayelelo kunye Ukuvula iimarike ezintsha.
Kwaye, ekugqibeleni, iyasebenza ukudibanisa kunye nokwandisa abathengi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Yintoni iFactoring?
I-Factoring iquka ukuthengisa iikhosi kwii-gazelle kwi-50 euros ngeendevu ngaphandle kokufumana umkhondo wohlalutyo olusisiseko.
Thixo wam, kungakanani ukukopela okukhoyo kwi-intanethi. Ewe kunjalo, ifilosofi efanayo yemonki
UCarlos ngaphandle kwegama lokugqibela sitsho
Bafo, le webhusayithi ayisekho kwimonki. Ngokwetshomi yakhe ebikumaqela akhe kaWhatsApp, uye wayivala emva kwengxaki nentombi yakhe. Ngoku endaweni yayo sinayo le webhusayithi; Ndiyayithanda buqu kodwa eso sisigqibo somntu wonke.
Ngokumalunga nokufaka izinto, ayisiyonyonyo. Kwinkampani kwaye kuxhomekeke kwimeko apho lukhetho olukhulu 🙂
Phendula uCarlos ngaphandle kwegama lokugqibela
Isizathu sokuba umonki anike isizathu sokuba avale ibhlog yakhe ndicinga ukuba ngamanzi.
Uthe bekukho izimvo zobuhlanga xa ibhlog inazo zonke iikhomenti ezihloliweyo kwaye uthatha isigqibo sokuba zeziphi ezipapashiweyo kwaye azikho.
Ngethuba lokuba ngokunqakraza kwikhonkco kwiwebhusayithi elmonjepaciente isibuyisela kwiwebhusayithi enomxholo wengxowa, uyazi ukuba zingaphi iindwendwe kule webhusayithi eziza kufumana kubantu abanomdla engxoweni bezama ukungena kwi-monkpatiente? Indenza ndikrokre.
Ngokwamaqela abo, abanye bathi ii-imeyile zentengiso zazivela kule webhusayithi.
Konke kwenzeka ngamabona-ndenzile, ndiyarhana ukuba oku kwenziwa ngenjongo. Iinjongo? Uya kwazi, ndinezigqibo ezam
Yintoni ingxaki? Ngaba wayengazukuhlala naye eBulgaria?
Yintoni le yenzekayo apha
Ndihlala ndindwendwela iphepha lakho ndisebenzisa i-AdBlock, bekucaca ukuba ibububhanxa bokubhengeza, ucofa ifama. Lo mfo ufuna imibono nje yeentengiso zakhe.
Ungayichazanga eyokuba ulixoki de angabinako ...
Umonki uyathetha, uxoka ngaphezu kokuthetha. Into exabisekileyo ye-AZ, intlanganiso kunye ne-brufau, iipotifoliyo ezilawulayo zezigidi ngezigidi ze-euro….
Kwii-webinars ndimbonile ephikisana naye, apho ndithe nditsho ndithi diego, kulungile ... Ingcinga yakhe ayisiyonto imbi kwaphela, kodwa uxoka kakhulu
UMichael Burry sitsho
Nina bangosomashishini thethani inyani, oku kubeka izinto kumdaka, ewe? Haha salu2
Ihlazo lokwenene. Ukuba ufunda le monki, kwelam icala, khuthaza nje ukuba uqhubeke nomsebenzi omangalisayo obuwuphuhlisile.
Umhlalutyi olungileyo osisiseko obonakalise ngokuphandle nangokucacileyo nangokuqondakalayo kuzo zonke izizathu zokuba kutheni ekhethe enye okanye enye utyalo-mali. Nokuba awukhethanga, bonisa nezizathu zokuba kutheni ungatyali imali kwinkampani enjalo. Ubuncwane bokwenene.
Ngaba zigqabhukile isipaji sakho?… Akakhathali, akakhathali !!! Lowo kufuneka enze i-3, iikhosi ezi-4 zeebhasi? Ewe kunjalo !!!
Po kwaye ngoku siza kwenza ntoni ??, ke xa sifika kwifama yehagu ukuza kubamba imali entsha kwi-gazelle, thabatha ii-euro zokugqibela ze-4, nokuba kwenzeka ntoni.
Monk, ungayihoyi iitroll ezinomona ezingenanto ilungileyo yokuchitha ixesha lazo. Uluntu lwe-b & h likuwe.
Kodwa yintoni le fuck. Ndifuna iMonk. Ukuba ufunda le Monk sifuna ingcaciso ngokwenzekayo.
Isiphumo sokugqibela sitsho
Ngomso kwiwebhusayithi yoMoni oMbi, ingcaciso iya kufunwa ngecala "leMonent yeMonond".
Ngaba umBulgaria umshiyile?
Zonke ezi mpendulo kunye nokunye, ngomso kuMoni oMbi
Phendula kwisiphumo sokugqibela
Ndiyathemba ukuba umonki ulungile
Imonki awuyithengisanga idatha yam? Iimeyile zivela kweli phepha.
Imonki Kwenzeka ntoni? Kubonakala kulungile kum ukuba uyancama kodwa hayi ngale ndlela. Isiteyitimenti kwibhlog yakho, uyishiya iintsuku ezimbalwa kwaye uyivale. Kodwa ukuthengisa isizinda ngeedola ezimbini kunye nedatha yabantu abakulandelayo ayisiyonto yokuziphatha, ayihambelani noko uninzi lwethu lucinga ukuba sikubonile kuwe
Ukuthengisa idomain akukho nto. Le truñete inesiginitsha efanayo nebhlog kaSergio.
Ndiyakuqinisekisa 100% ukuba abanini bale webhusayithi abananto yakwenza nemonki.
Yayikukuhanjiswa nje kwakhona kwesizinda, akukho nto iyenye.
Ngaba uthetha ukuba le webhusayithi iseyi-monk? Kuyinyani ukuba yonke into inqabile
Kodwa ukuba unayo imania yokubeka amabinzana ngqindilili kuyo yonke indawo ...
Okanye intelekelelo ethi "Ewe ewe, ngokujonga izinto ngokuzimela kunye nokuzimela, iyakuphulukana nayo."
Ke iphinda ifihliwe? Lo mfo njengoko befunda i-primer yenza isileyiti esicocekileyo.
-Kwiminyaka ka-2005 ukuya ku-2006 wayenayo i "HELLBOY boiler" apho wayezinikezele ekufudumaleni ii-ertyisi kwaye ubunzima bakhe be gacelil bamlandela.
-Kwaye ke ngo-2014 ndamisa ibhlog yam «uMonki oMonde» apho athe waxhwithela khona amantshontsho amaninzi ngokubathengisela izifundo kunye nokwenza ukuba balahlekelwe ziihempe zabo kwizenzo ezimbi ezithengwe ngexesha elibi.
- Kwaye ngoku undixelela ukuba ikwanguye lo? Qalisa iprojekthi entsha? Abathengisi bomsi banjalo, kufuneka batshintshe izazisi zabo xa sele belifundile ikhadi.
Ukuba loo Hellboy uyinyani, le ndoda yayinefilosofi echasene ngokupheleleyo naleyo yayiyifundisile kamva.
Yinyani njengobomi uqobo. Ifilosofi? Loo mntu uyazi kuphela ifilosofi ye- €
Umzuzu wokugqibela! sitsho
Umonki ubuyile, ukuqinisekisile kumaqela akhe e-wasap.
Ngomso wonke umntu kwiwebhusayithi yePobre Pecador ukuze azi iinkcukacha zokubuyela kwakhe kwiwebhusayithi yakhe entsha
Phendula kumzuzu wokugqibela!
26 izimvo? Kukho abantu aba-3 apha kakhulu kwaye ndithatha ithuba.
Ndikunye nawe Roberto, 3-4 abantu bephendula kuye kakhulu.
Eyona mpikiswano yayiyeyona monki ??. Oh yam ...
Umoni ombi sitsho
Andazi ukuba ndiza kuyipapasha imonki ngomso, umhlobo usandula ukufika ephethe ibhokisi yealbariños ezintsha kunye nobushushu edolophini sele ndifumana isiyezi nje ngokucinga ngesidlo sangokuhlwa
Phendula umoni ombi
Troll, eyakho sele indithanda ...
Luluphi ufundo okanye lubisi luni !! Sifuna imonki ibuye
Wayecinga ukuba iwebhu yakhe / ithambeka / iiprofayili zentlalo zaziqhekeziwe,… kodwa ukuba into ayenzileyo ithengisa idomeyini / iwebhu / idatha… iyangqina into uninzi lwethu oluyicinga ngaye, ukuba wayengekho / yingqolowa ecocekileyo.
Kubuhlungu ukubona ukuba umntu onokuba sisalathiso eluntwini (nokuba wenza iimpazamo ngamanye amaxesha) uyayenza le nto ... Kubuhlungu kwaye kuyalingana neshishini lakhe lehagu. Yonke into iyadibana ngoku, ixesha libeka wonke umntu endaweni yakhe.
Sifuna ukufunda iMonki
Indoda, ukuba ibhlog yakhe ibiluncedo okanye bekungabonwa ukuba ungumlinganiswa, wayeyi-bipolar
Omnye wabalinganiswa abalungileyo ukhohlisiwe luluntu lwakhe, kodwa abo kuthi bambonayo esiza sizisondeze kuye.
Ukuthi imonki ayamkeli ukuba bayamchasa kwaye sele ikhuphe namalungu amaqela akhe kuWhatsApp ngokumxelela iinyaniso ezine.
Ayisiyiyo Monk yokwenyani, ubanjiwe !!
Molo, ndiyifumene inomdla kakhulu, kodwa kusekho izinto ezingacacanga kum malunga nokufaka izinto. Ngaba ukhona umntu onokundinceda?
Yintoni ekufuneka ujonge kuyo ukuze uthathe isikhundla kwimarike yemasheya?
Emva kweBrexit, yintoni elindele abatyali mali?